Kufsi Lagu Eedeeyey Mo Farah Saaxiibkii iyo Dil Loogu Hanjabay
HomeAfricaKufsi Lagu Eedeeyey Mo Farah Saaxiibkii iyo Dil Loogu Hanjabay
02/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Mid ka mid ah orodyahannada xawaaraha dheer oo ay saaxiibbo yihiin isla markaana wada tababartaan orodyahanka Soomaaliga ah ee Mo Farah ayey la soo deristay cabsi kadib markii loogu hanjabay in la dili doono, iyadoo laga daba joogo eedaymo la xidhiidha in uu kufsaday haweenay 15 jir ah oo orodyahan ah dalka Uganda gudihiisa.
Orodyahankan oo lagu magacaabo Moses Kipsiro oo si laba jeer oo xidhiidh ah ku guuleystay orodka 10,000 mitier ee ciyaaraha Commonwealth ee sannadkii ka hore ka dhacay Glasgow ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay toddobaadkan in ay shan dumar ah oo orodyahanno ahi u yimaaddeen si ay u caawiyaan kadib markii uu helay farriimo badan oo xambaarsan hanjabaad dil ah, waxaana uu xusay in uu arrintan ku wargeliyey booliska iyo xidhiidhka ciyaaraha ee dalkiisa Uganda.
Isniintii toddobaadkan ayaa Kipsiro uu helay farriintii u dambaysay ee hanjabaadda ah taas oo si aan kala joogsi lahayn ugu soo dhacaysay qoraal loogu soo dirayo telefoonkiisa gacanta.
Sarkaal ka tirsan booliska Uganda ayaa u sheegay warbaahinta in uu orodyahankani helayo farriimo badan oo hanjabaad ah, waxase markiiba soo baxay su’aal odhanaysa miyuu orodyahankani ka tegi doonaa dalka Uganda oo ay u joogaan xaaskiisa iyo saddex carruur ah oo uu dhalay, waxaana su’aashaas ka jawaabay booliska oo tibaaxay in aanu ka guuri doonin dalka.
Kipsiro ayaa hadalka Booliska waxa uu u arkayaa in aanu ahayn mid meel mar ah oo lagu kalsoonaan karo, isla markaana haddii ay baadhitaan degdeg ah samayn waayaan, iyaga oo raadinaya dadka hanjabaadda soo diraya in uu ku khasbanaan doono in uu naftiisa iyo qoyskiisaba badbaadiyo oo uu dalka ka cararo.
Kipsiro oo ay da’diisu tahay 28 jir ayaa sannadkii hore waxa uu tababare u noqday shan haween da’yar ah, waxaana ay shantaas hablood mid ka mid ahi ku eedaysay in uu kufsaday, isaga oo u sheegay inay u baahan tahay in ay uur yeelato kadibna iska soo riddo taasina ay ka caawin karto in sida ciyaartooyada dumarka ah ee Kenya ay si fiican u ordi karto.
“Inantaasi waxay sheegtay, in aan u sheegay in aan doonayo in ay uur ii yeelato kadibna ay iska soo tuurto, sababtoo ah sidaasi waxay u kordhinaysaa ama kala bixinaysaa qaybaha jidhkeeda, waxaanay u suurtogelinaysaa in ay u ordaan si la mid ah haweenka Kenya.” Sidaa waxa yidhi Kipsiro oo ka hadlayey waxa ay inantaasi ku eedaysay.
“Booliska ayaan u tegay, laakiin illaa hadda waxba may qabanin, waxaanan helayaa farriimo hanjabaad dil ah. Walaalkay ayaa isagana loo hanjabay oo kadibna la xidhay, anigana waxa la iga saaray ciyaartooyada qaranka. Maan ka qayb gelin orodka World Cross Country Championship ee toddobaadkii hore ka dhacay China arrintan darteed.” Ayuu mar kale yidhi Kipsiro.
Saddex ka mid ah hablahan orodyahannada ah ayaa beeniyey arrintan, hase yeeshee wargeys ka soo baxa dalka Uganda ayaa qoray in hablahaasi u sheegeen in uu saq dhexe qolkooda ugu soo galay, isla markaana uu ugu hanjabay in uu ka eryi doono tabababarka haddii aanay ogolaanin xumaanta uu rabo. Waxa uu wargeysku intaa raaciyey in xu aantiisa maalin walba samayn jiray, qofka diidana uu ciqaabi jiray, maadaama aanay jirin cid kale oo tababare u noqota oo meesha joogtay.
Xoghayaha guud ee xidhiidhka Uganda oo lagu magcaabo Beatrice Ayikoru ayaa laga soo xigtay in uu sheegay in dhamaan eedaymaha loo jeedinayo tababaraha ahna orodyahanka Kipsiro ay been yihiin oo aanay waxba ka jirin, isla markaana mar uu Kampala kula kulmay Kipsira uu arrintan kala hadlay, sidaana ay ugu caddaatay in aanay waxba ka jirin.`
Pirlo: Waan Ka Weynaaday Da’daan Ku Biiri Lahaa PSG
Diego Costa: Waxaa la iila dhaqmay sida dembiilaha Oo Kale
14/08/2017 Abdiwahab Ahmed
Tababaraha Cusub Ee Rangers Oo La Kowsaday Guul-darro
23/12/2017 Abdiwahab Ahmed